जापानी मून मेलन: अस्तित्व नै नरहेको निलो तरबुजो - THIP Media
के मून मेलन अस्तित्वमा छ?
के उस्तै गुणहरू भएको अन्य कुनै फलफूल अस्तित्व मा छ?
इन्टरनेटको अनेकौँ प्लेटफर्महरूमा एउटा नक्कली फोटो देखिएको छ। उक्त फोटो जापानमा खेती गरिने एक प्रकारको तरबुजो मून मेलन रहेको भनेर दाबी गरिएको छ। उक्त फोटो २०१४ देखि नै पिन्टरेस्ट, फेसबुक, ट्विटर र व्हाट्सएपमा साझा गरिएको छ र यसको ’boutमा अनेकौं पटक तथ्य जाँच पनि गरिएको छ। हामीले उक्त जानकारी झूटो रहेको कुरा पत्ता लगायौं।
उक्त दाबी तल दिइएको अनुसार एउटा फोटो को रूप मा पिन्टरेस्टमा साझा गरिएको छ । धेरै वेबसाइटहरूले यसलाई विवरण सहित साझा गरेका छन् । केही वेबसाइटले यसको मूल्य १६००० येन रहेको कुरा पनि साझा गरेका छन्।
होइन, मून मेलन भन्ने कुनै पनि फल वा तरकारी अस्तित्वमा छैन। फोटोमा देखिएको निलो तरबुजो स्पष्ट रुपमा फोटोशप द्वारा परिवर्तन गरिएको छ। तथ्य जाँच गर्ने वेबसाइट Snopes.com ले २०१४ मै यस दाबीलाई खारेज गरिसकेको छ । उक्त रिपोर्ट तपाई यहाँ पढ्न सक्नुहुनेछ।
फोटो मा देखाइएको फलको रूप र रङ्ग सङ्ग मेल खाने कुनै पनि फल अस्तित्वमा रहेको छैन।
यद्यपि, विवरण मा दाबी गरिएको स्वाद परिवर्तन गर्ने विशेषता भएको फल पश्चिमी अफ्रिकामा उम्रने मिरेकल बेरी सङ्ग मेल खान्छ। मिरेकल बेरीले कथित रूपमा मिराक्युलिन भन्ने प्रोटीन उत्पादन गर्छ र यसले हाम्रो स्वादलाई अस्थायी रूपमा परिवर्तन गर्न सक्छ (उदाहरण को लागि गुलियो स्वाद गुलियो नलाग्ने)।
उक्त फल वा यसको रस प्रायः जमेको, पाउडर वा चक्की को रूपमा बेच्ने गरिन्छ र यसलाई “स्वाद परिवर्तन गर्ने फल” वा “अमिलो स्वादलाई गुलियो बनाउने फल” को रूपमा प्रचार गरिन्छ। यद्यपि, यो बुझ्नु आवश्यक छ कि मिरेकल बेरी ‘निलो तरबुजो’ जस्तो देखिँदैन। यी साना रातो बेरी मात्र हुन्छन् (सन्दर्भ को लागि तलको फोटो हेर्नुहोस्):
Previous articleभारतीय विद्यार्थी रामुले मरिच, अदुवा, र मह प्रयोग गरि कोभिड को उपचार खोजी गरेका छैनन्
Next articleतथ्य जाँच: के खानामा मरीच प्रयोग गरेर तपाई कोभिड-१९ बाट जोगिन सक्नुहुनेछ?